SOM-J/Land-“Kisima”-R/wasaare-Xassan Cali Kheyre Oo Dhagax-Dhigay!!…warbixin & Sawirro… | Allkisima.com
Kismaayo:-(Allkisima)-R/Wasaaraha X.F.SOMALIA Dr:-Xasan Cali Kheyre ayaa gelinkii dambe ee shalay Khamiistii Dhagax dhigay laba dhismo oo lagu wado in laga hirgeliyo Magaalada Kismaayo.
Dhismayaashan Cusub ayaa waxaa loogu tala-galay inay ku shaqeeyan Wasaaradaha Beeraha, Kalluumeysiga iyo Xannaanada Xoolaha,Sidoo kale waxaa la qorsheynaya in Magaalada Kismaayo laga hirgeliyo xarun kale oo loo qorsheeyay in dhalinyarada ay ku kulmaan mustaqbalka.
R/Wasaaraha SOMALIA,ayaa waxaa dhagax dhigan ku wehlinayay masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Maaliyadda, C/raxmaan Ducaale Bayle, Mr- AAxmed Madoobe iyo xubno kale oo ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumadda iyo maamulka kismaayo ka jira xilligan.
Dhanka kale Bulshada reer Kismaayo, ee xilligan ayaa si weyn u soo dhoweysay booqashada ay magaaladan ku Jooggan R/Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Golihiisa Wasiirada, oo Khamiistii shirkoodii ugu horreeyay ku yeeshay-Kismaayo.
Dhinaca kale R/Wasaare Kheyre, ayaa shirkan uga qabsoomay Kismaayo ku macneeyay mid lagu xoojinayo wada shaqaynta iyo midnimada shacbiga Somaliyeed.
Kismaayo iyo magaalooyinka kale ee dalka, ayaa aad looga hadal-hayo booqashada Golaha Wasiirrada Somalia ku jooggan Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee kismaayo,waxaana Shacabk ka soo burqanaya fikrado kala duwan.
Ugu dambeyntiina Ciidamo ka socda DF-SOMALIA & kuwa kismaayo ku sugan ayaa adkeeyay amniga guud ee Magaalada Kismaayo,waxaana ay hakad geliyeen ganacsigii & isu-socodkii gaadiidka iyo dadkaba ee qaybo ka mid ah magaalada.